Aha! Jokes, Satire | Myanmar Gazette News Media Forum Network - Page 10
Aha! Jokes, Satire	10
အင်္ဂါသားသမီးများ DJ ရောင်းပါ
ဒီနေ့ ဘလက်ချော ရဲ့ ချက်တင် မှတ်တမ်း…။
အိမ်ကွင်း ကန်တဲ့ ဘလက်ချော…။
လုပ်ငန်းခွင် အလွဲများ – ၁
​ခေတ်​သစ်​ စကားပုံနှင့်​ စကားထာများ
​တောထွက်​ပါမယ်​ ဆို​တော့ ​တောကမရှိ